» के तपाईंलाई थाहा छ– सुतेपछि हाम्रो शरीरमा के के हुन्छ ?
के तपाईंलाई थाहा छ– सुतेपछि हाम्रो शरीरमा के के हुन्छ ?
१० पुष २०७६, बिहीबार १९:१०
सुतेपछि त हामी एक किसिमले बेहोस जस्तै नै भएको हुन्छौं । हाम्रो वरिपर जे जस्तोसुकै घटना भए पनि हामीले थाहा नै पाउँदैनौ । त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो शरीरमा के के भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने ?
प्रत्येक राति हामी सुत्छौं । सुतेर गाढा निद्रामा पुगपछि हामी साँचै नै बेहास जस्तै हुन्छौं । तर यसको अर्थ यो होइन, हाम्रो शरीरले पनि काम नै गर्न छोडेको हुन्छ । सुत्दा पनि हाम्रो शरीरको महत्वपूर्ण अंगहरुले काम गरिरहेकै हुन्छ ।
हामी सुतेपछि हुने सबैभन्दा प्रमुख कुराहरु मध्ये एउटा के हो भने, हाम्रो शरीरको मांशपेसीहरुले पूरै आराम गर्छ । नपत्याए कुनै सुतिरहेको मान्छेको हातलाई विस्तारै माथि उठाउनुहोस् त, तपाईंले सजिलै उठाउन सक्नु हुनेछ । यो कुरा सुतेको मान्छेले चाला नै पाउँदैन ।
सुतेको बेला हामी चल्मलाउँछौ । कोही कम चल्मालाउँछौ, कोही बेसी । कसैकसैले पूरै शरीर घुमाउँछ, यता उता कोल्टे फेर्छ । यो मान्छेको स्वभाव, वातावरणको तापक्रम, उसले सुत्नुअघि खएको खाना आदिमा पनि भरपर्छ । तर सामान्यतः एउटा स्वस्थ मान्छेको एक रातमा २० देखि ४० पटकसम्म चल्मलाँउछ । रोचक त के छ भने, हामी प्रत्येक घण्टामा केही सेकेण्ड मात्र र एक रातभरिमा केही मिनेट मात्र चल्मालाएको हुन्छौं ।
हामी जागेको बेला देखेको घटनाबारे आ–आफ्नै किसिमले प्रतिक्रिया जनाउँछौं । तर सुतेको बेला सबै एकै समान हुन्छन् । किनभने, कसैले पनि आफू वरिपरि के भइरहेछ भन्ने कुरा थाहा नै पाउन सक्दैन । सुतेको मान्छेले कुनै हल्ला, गन्ध, तातो वा प्रकाश जस्ता वाहिरी कारणले अकास्मात जाग्यो भने पनि त्यसबारे सबैको प्रतिक्रिया एकै किसिमको नै हुन्छ ।
सुतेको बेला हाम्रो शरीरमा रगत दौडिरहेको हुन्छ । तर हाम्रो मुटु सामान्य अवस्थामा भन्दा कम नै धड्किरहेको हुन्छ । त्यसै गरी हामीले श्वास पनि विस्तारै फेरिरहेका हुन्छौ । हाम्रो पाचन प्रणालीले भने, उठेको बेलामा जस्तै सामान्य रुपमा नै काम गरिरहेको हुन्छ । हाम्रो कलेजो र मृगौलाले पनि काम गरिरहेको हुन्छ, तर अलि कम ९मन्द० गतिमा । हाम्रो शरीरको तापक्रम पनि केही घटेको हुन्छ । हाम्रो शरीरको छालामा नमीको मात्रा बढेको हुन्छ तर हत्केला र पैतलामा भने त्यो घटेको हुन्छ ।
केही मान्छेहरु के विश्वास गर्छन् भने, सुतेको एक समयमा हामी गहिरो निद्रामा हुन्छौं । तर यो कुरा साँचो हैन । हामी सुतेको अवधिभर पटक पटक गहिरो र सामान्य निद्रामा भइरहेका नै हुन्छौं । स्रोत : रातोपाटी
बिहीवार मकवानपुरमा २१ जनामा कोरोना पुष्टि